A 24-anụ ọhịa obere ihuenyo maka gị ama ma ọ bụ laptọọpụ | Akụkọ akụrụngwa
Ọtụtụ n'ime anyị na-eji na-arụ ọrụ na abụọ Monitors, m na mbụ. Ma ọ bụ na ịdị mfe nke ịrụ ọrụ na ihuenyo abụọ (mgbe ịmara etu esi eme ya), na-eme ka ị hụkwuo ngwaahịa. Nke a bụ ihe ndị isi niile kwesịrị ịma. Agbanyeghị, taa, anyị chọrọ igosi ụdị azịza nke nsogbu nke ịrụ ọrụ na ihuenyo abụọ mgbe anyị na-anọghị n'ụlọ, Nke a 24-inch obere ihuenyo mara dị ka SPUD ga-eme ka ị pụọ n'ọtụtụ nsogbu, ana m echebara echiche ịnweta ya, ọ bụ ezie na emechara m ahụ ọnụahịa ma ọ gafere m, ma ọ bụ ...
SPUD (Spontaneus Pop Up Ngosipụta) Ọ bụ 24-anụ ọhịa ahụ obere ihuenyo m hụrụ nke a ụtụtụ na Microsiervos na m nwere nnukwu mkpa ịkọrọ gị. Dị ka ọtụtụ n'ime ihe ndị a, ọ ka bụ ọrụ. Chọta ego na Kickstarter, n'ihi ya, ọ gaghị eju anyị anya ma ọ bụrụ na ọnụego ndị China dị ọnụ ala karịa pụta na ụbọchị ndị na-abịanụ, ọ bụkwa otú ahụ ka ha si arụ ọrụ na China, Kickstarter bụ nnukwu onye na-eweta echiche. Na nkenke, ihuenyo ahụ karịrị ego a rịọrọ, kedu ka ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, ọ ga - adị njikere n'oge ọkọchị ọzọ maka naanị 340 euro.
Ihuenyo ahụ, na mgbakwunye na mgbanwe, na-enweta ihe onyonyo nke projector nke dị n'ime, enweghị LCD ma ọ bụ AMOLED panel, ihe dịka telivishọn ochie. N'aka nke ọzọ, ọ nwere mkpebi nke 1280 × 720 pikselụ (HD) na oke 16: 9. Iji nye gị ihe onyonyo, Anyị nwere ike ijikọ ya site na HDMI ma ọ bụ ikuku, ọbụlagodi na ọnọdụ anyị họọrọ, yana nchaputa, ga - eme ka batrị gi daa, nke di n’agbata awa anọ na iri. Agbanyeghị, enwere ike iji ya tinye aka na mgbidi ahụ, yabụ ịchị onwe ya ekwesịghị ịbụ nnukwu nsogbu ịghara iji ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » A 24-anụ ọhịa obere ihuenyo maka gị ama ma ọ bụ laptọọpụ
Instagram ga-agwa gị ma ọ bụrụ na ị nweta nseta ihuenyo